परमेश्वरको वचन जीवित छ, यसले जीवन दिन्छ | eBachan Nepali Christian Magazine
परमेश्वरको वचन जीवित छ, यसले जीवन दिन्छ
नेपाल थियोलोजिकल कलेज
हामीलाई थाहा छ, परमेश्वरको वचन कसरी नेपालमा आयो । पहिला परमेश्वरको वचन घोषणा गर्न मुस्कील र गाह«ो थियो । धेरै अग्रजहरू धेरै गाह«ो अवस्थामा संघर्ष गर्नु प¥यो । आजको जस्तो सजिलो थिएन । बाइबल र बाइबलको शिक्षा मानिसहरूको हात हातमा पु¥याउने कार्यलाई अपराधी रूपमा लिईन्थ्यो । यो हाम्रो इतिहास हो । त्यो अवस्थाबाट हामीहरू आएका हौं । बाइबलले यो पनि भन्दछ कि परमेश्वरको वचन जीवित भएको हुनाले कुनै पनि मानिसले यो वचनलाई रोक्न सक्दैन । त्यसैकारण
परमेश्वरको वचन जीवित छ । यसले जीवन दिन्छ । म अग्रजहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले कति कठिन अवस्थामा ४० वर्ष अघि नेपाल बाइबल सोसाइटी शुरु गर्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यसैले अहिले बाइबल सोसाइटीलाई इतिहास बनाएको छ । परमेश्वरको वचन जीवित छ । यसले जीवन दिन्छ । यद्यपी यो
पुरानो पुस्तक हो । पुरानो भएता पनि यो कहिल्यै पुरानो हुँदैन । सबैभन्दा छोटो समयमा जिउने राजनीतिक हो । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्था परिवर्तन भईसकेको हुन्छ । एकजना प्रोफेसरले मलाई भनेका थिए, “राजनीतिकको पुस्तक लेख्न लागेको परिवर्तन हुँदाहुँदा कहिल्यै पनि छाप्न पाइन ।””
कहिल्यै परिवर्तन नहुने जीवित परमेश्वरको वचन छ । आज नेपालका ख्रीष्टियनहरूले यो कुरालाई स्वीकार्नु पर्दछ । परमेश्वरले हामीलाई जीवित वचन दिनुभएको छ । यो वचनले जीवन दिन्छ । यो सोसाइटीले मण्डलीहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछ । मानव जातिका लागि परमेश्वरको वचन आवश्यक छ ।
परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई संरक्षण गर्ने, प्रकाशन गर्ने र मानिसहरूको हातमा लैजाने जिम्मेवारी हामीसँग छ । मेरो आफ्नै जीवनको सम्वन्धमा मैले २०२९ सालमा (१९७३) म स्कूलको विद्यार्थी हुँदा जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ
प्रतियोगितामा म स्कूलबाट छानिएको थिएँ । हामीले १००० वटा प्रश्नको उत्तर कण्ठ गर्नुप¥यो । हामीहरू चार जना भएको हुँनाले २५०÷२५० वटा एक जनाको भागमा प¥यो । त्यो २५० मध्येमा एउटा प्रश्न थियो । संसारको ज्योति को हो?”त्यसको जवाफ थियो, येशू ख्रीष्ट” । संसारको कुनै पनि पुस्तक वा (टेक्स्) मा लेखिएको वचनले मानिसको हृदयमा काम गर्दछ । मलाई अनुभव छ, कि येशू संसारको
ज्योति हुनुहुन्छ । यसरी हाजिरी जवाफमा भएको कुराले येशू को हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा ममा आयो । त्यसपछि सन् १९७६ मा प्रभुलाई विश्वास गरें । म सबैलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु । परमेश्वरको जीवित वचन जब कुनै मानिसले सुन्दछ, कुनै न कुनै दिन त्यसको हृदयमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले ल्याउनु हुन्छ । दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचन ज्ञान र बुद्विको खानी हो । केवल धार्मिक कुरामा मात्र सम्बन्धित छैन । त्रिभुवन विश्व–विद्यालयमा अंग्रेजी प्रोफेसरहरूले पनि पढाउछन्, तर उहाँहरूको व्याख्या मेरो भन्दा फरक छ । र पनि अहिले बाइबल पढाइरहेको
छ । किनभने यसमा ज्ञान, शिक्षा र बुद्विका कुराहरू छन् ।
जीवन कसरी चलाउने ? कसरी मेहनत गर्ने ? सबै किसिमका शिक्षाहरू बाइबलमा छ । यसले मानिसहरूलाई शिक्षा दिदछ, जीवनमा चाहिने सन्देश दिदछ र मार्ग दर्शन दिदछ । त्यसकारण जति धेरै मानिसहरूको हात हातमा
परमेश्वरको वचन पु¥याउनुपर्दछ । कुन दिन त्यो पढेर
येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दछ हामीलाई थाहा छैन । तर यो कुरा
हामीलाई थाहा छ, जब कुनै व्यक्तिको हातमा परमेश्वरको वचन पर्दछ तव परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ । उसको हातमा परेको वचन अर्को व्यक्तिले पढेर विश्वास गर्दछ । एक जना व्यक्तिले मलाई भन्नुभयो, “तपार्इंंले पढाउनुभएको बाइबलको शिक्षा पढे पछि मलाई पढ्न मन लागेन र टेवलमा राखेको थिए, अर्को एकजनाले त्यो पढेर ख्रीष्टियन बन्यो ।” त्यसकारण
परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ । अरुलाई दिनको लागि हिचकिचाउनु हुन्न । कुन परिस्थितीमा काम गर्दछ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई थाहा छ वचनले काम गर्छ । बाइबलले परमेश्वरको जीवित वचन बोकेको असल पुस्तक हो । नैतिक जीवन ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई परमेश्वरको शिक्षा आवश्यक छ । नेपालको समाज बिग्री राखेको ठिक र वेठिक छुटाउन ज्ञान मानिसहरूसँग छैन । भौतिकवादतिर मानिसहरू लागेका हुँनाले ठिक र बेठिक छुटाउने क्षमता ह्रास हुँदै गइरहेको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रमा समस्या नै समस्या आइरहेको अवस्थामा
परमेश्वरको वचनले भरिएको पुस्तक बाइबल चाहिन्छ । हामीहरूले बाइबल हात हातमा पु¥याउने हो भने परमेश्वर पवित्र आत्माले उहाँहरूको हृदयमा पु¥याउनु हुन्छ ।
परमेश्वरको वचन गलत कार्यको निम्तिमा चेतावनी दिन्छ र ठिक कार्य गर्नको निम्ति तालिम दिन्छ । त्यसले हामी को हौं भन्ने कुरा हाम्रो अनुहारलाई ऐनाको रूपमा देख्न
सक्दछौं । बाइबल पढ्दा कतिबेला शान्ति हुँदैन । त्यसकारण एक जना सम्राटले भनेका थिए, “बाइबल मेरो अगाडि नपढ, त्यसले मलाई छट्पटी बनाउदछ ।” हो, साँचै नै बाइबलले मानिसलाई
छट्पटी पार्दछ, किनभने यो ऐना हो । हामीले गरेका गलत
कुराहरू बाइबलले छर्ल· देखाइदिन्छ । हाम्रो विवेकलाई
दोष लाउँछ । त्यो दोष हामीलाई बनाउन हो, विनास गर्न
होइन तर हामीलाई ठिक बाटोमा हिडाउनको लागि हो ।
परमेश्वरको वचनले छटपटि दिन्छ, साथसाथै परमेश्वरको शान्ति दिन्छ । जव पश्चातापमा मानिस जान्छ, असल जीवन जिउन
परमेश्वरको वचन अपरिहार्य हो । आज बाइबललाई धर्म र धार्मिक कुरामा जोड्छन् । बाइबल धर्मकर्मभन्दा जीवन
परिवर्तनसँग बढी सम्बन्धित छ । यसले मानिसको आन्तरिक जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ । सोच, दृष्टिकोणलाई परिवर्तन
गराइदिन्छ । यो परमेश्वरको तरिका हो । परमेश्वर धर्मकर्मसँग चासो राख्नुहुन्न तर जीवन परिवर्तनसँग उहाँ चासो राख्नुहुन्छ । परिवर्तन गर्ने क्षमता केवल उहाँमा मात्रै छ ।
सम्पुर्ण वचन परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएका हुन् । प्रेरणाभन्दा अझबढी प्रकाश र गहिरो अर्थमा उहाँको सास हो । यो जीवनसँग सम्बधित छ । नेपालीमा पहिले बाइबल १८२१ म भारतको रामपुर भन्ने ठाउँमा युलियम केरीले नयाँ करार बाइबल अनुवाद गरेका थिए । नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तक नै
नेपाली बाइबल थियो । सन् १९१४ मा पादरी गंगाप्रसाद प्रधानको
नेतृत्वले नेपाली पवित्र बाइबल अनुवाद र प्रकाशन गरेको
थियो । नेपाली बाइबलको सतवार्षिकी समारोह २०१४ मा
मनाइएको थियो । परमेश्वरको वचन विना आत्मिक भोकमा पर्दछन् । त्यसकारण सबैलाई परमेश्वरको वचन पु¥याउनु
पर्दछ । आमेन ।
नोटः (२०७३ चैत्र १५ गते, कमलादी, काठमाडौंमा नेपाल बाइबल सोसाइटीको माणिक उत्सव समारोहमा प्रचारित
Previous: अचम्मको भेट
Next: मेरो परिवरको जीवन घट्ना।